नेपाल आज | बानेश्वरमा केटाहरुले यौन दुर्व्यवहार गरेपछि बेस्करी धम्काएं: राज्यमन्त्री कुन्ती शाही
अन्तरवार्ता ताजा खबर मेरो परिवार मेरो कथा समाचार
बानेश्वरमा केटाहरुले यौन दुर्व्यवहार गरेपछि बेस्करी धम्काएं: राज्यमन्त्री कुन्ती शाही
शुक्रबार, १० असार २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
कुन्ती शाही राप्रपा नेपालका तर्फबाट पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् भइन् । संविधान जारी भएपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री बनिन् । आर्कषक जिउडाल र युवावयका कारण पनि कुन्ती धेरैको नजरमा पर्छिन् । कञ्चन न्यौपानेले धेरैको नजरमा नपरेका कुन्तीको जीवनका कैयौं पाटा केलाउने प्रयास गरेकी छन् ।
मैले दैलेखको त्रिभुवन उच्च माविबाट एसएलसी गरेकी हुं । एसएलसीपछि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जबाट आइएल गरेँ । ब्याचलर्सको फर्स्ट इयरसम्म म नेपालगञ्जमै पढ्थेँ । राजनीतिमा त म आठ कक्षामा अध्ययन गर्नेवेलामा नै लागेकी थिए । विद्यार्थी राजनीतिको सुरुवात मालेबाट गरेको थिएँ । एमाले एकीकृत हुनुभन्दा अघि माले थियो, मालेको विद्यार्थीको जिल्ला सचिव थिएं । क्याम्पसमा आइसकेपछि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतर्फ आर्कषित भए । म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठनको झापामा भएको महाधिवेशनबाट केन्द्रिय सदस्य भएँ । निरन्तर रुपमा म आफ्नो राजनीतिक यात्रामा अघि बढिरहेँ । म केन्द्रिय सदस्य भएको नाताले काठमाडौं आइरहनु पथ्र्यो । महिनामा एकदुई पटक आउनैपर्ने भएपछि मैले काठमाडौंको कलेजमा ट्रान्सफर गरें । काठमाडौँ आउँदा म संगठनको उपाध्यक्ष भइसकेकी थिएं ।
त्यसपछि मलाई महिला संघमा काम गर्न मन लाग्यो । विद्यार्थी संगठनमा अनेकथरी मान्छेहरुसंग प्रतिप्रष्र्धा गर्नुपर्ने । महिला संगठनमा महिलासंग मात्र प्रतिष्प्रर्धा गरे पुग्ने । महिलाहरुलाई राजनीतिमा आउँन र आइसकेपछि पनि टिकिरहन धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ । हाम्रो सामाजिक गतिविधि, सोच र परिवेश नराम्रो भएकाले महिलालाई राजनीतिमा आउँन असजिलो र आएकालाई पनि प्रगति गर्न गाह्रो भएको कुरालाई महशुश गरेपछि मैले महिला संगठन रोजे । महिला संगठनको भैरवामा भएको अधिवेशनबाट म महासचिव पदमा निर्वाचित भएँ । अर्को अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएं । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित भइसकेको थिएं । पार्टीको सहायक महामन्त्रीको जीम्मेवारीपनि पाएं । विद्यार्थी राजनीति गर्दै दैलेखजस्तो ठाउँबाट कैयन आरोह, अवरोह र अवरोधहरुलाई पार गर्दै म यहाँसम्म आएको छु ।
यहाँ त स्थानीय विकास राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । विकास कसरी गर्ने ? विकासका लागि योजना कस्ता छन् तपाइँको ?
विशेषगरि स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भनेको स्थानिय निकायहरुबाट हुने कामहरु हेर्ने हो । सरल, सहज र शसक्त रुपमा जनताले महशुश गर्ने गरि सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी केन्द्रीत छौं । संघियतामा आधारित सडक बत्ति भन्ने योजना ल्याएका छौँ । सडक अध्ँयारो हुंदा सबैलाई कठिनाइ हुन्छ । त्यसमाथि महिलामाथि हिंसा नै हुने गर्दछ । यो योजनाको काम अघि बढिसकेको छ ।
दशैंसम्म सडक उज्ज्यालो बनाउने गरी काम भइरहेको छ । जुन गा.वि.स मा बाटो पुगेको छैन , दुई वर्ष भित्रमा बाटो पुर्याउने अभियानमा हामी लागेका छौँ । भारतका सीमावर्तीे नेपालका बस्तीहरुमा सीमा क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको योजना बनाएका छौँ । महिला, दलित, जनजाति, बालबालिका, वृद्ध र लक्षित वर्गमा जाने पैसा ठीक किसिमले ठीक ढङ्गबाट उनीहरुकै लागि सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर कडा रुपले हामीले निर्देशन दिएका छौँ । मलाई लाग्छ बेरुजु पनि एउटा समस्या हो । बेरुजुलाई न्यूनिकरण गर्दै अन्त्य गर्नतिर हामी लागि रहेका छौँ । स्थानियस्तरमा काम प्रभावकारी तबरले गर्नका लागि जनप्रतिनिधि आवश्यक छ । त्यसैले यहि मंसिरमा हामीले स्थानिय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरेका छौं ।
सेक्सुअल ह्र्यासमेन्ट छ । तर ह्र्यासमेन्टको प्रकृति फरकफरक हुनसक्छ । कहिलेकाहीं मान्छेले हेरिरहेरपनि ह्र्यासमेन्ट गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै महिलाहरु ह्र्यासमेन्टमा परिरहेका हुन्छन् । मेरो बच्चादेखिकै स्वभाव हो प्रतिरोध गर्ने । ममाथि अन्याय भयो भन्ने लाग्यो भने जस्तोसुकै परिस्थिति र जोसुकैसंगपनि म प्रतिरोध गर्छु । मलाई सेक्सुअल्ली ह्यासमेन्ट गर्न खोज्दा मैले प्रतिकार गरेकी छु । जब म बि एल पढ्न काठमाडौँ बस्थेँ । क्याम्पस जांदाआउंदा बानेश्वरको बाटोमा सधैँ केटाहरुको समुहसंग जम्काभेट हुन्थ्यो । त्यो समुहले केटी देख्यो कि जिस्काउने गर्थे । कहिलेकाहीं त कलेजै नजाऊ भन्ने पनि हुन्थ्यो । उनीहरुले अनैतिक शब्द प्रयोग गर्थे ।
म हिड्दै गर्दा अश्लिल शब्द प्रयोग गरे । मैले सहनै सकिन । धम्कीपूर्ण भाषामा गाली गरेँ । त्यसपछि मलाई त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न छाडे । मसंग उपद्रो व्यवहारपनि गरेनन् । महिलाहरुले आँट गर्नुपर्छ तर परिस्थितीलाई हेर्नुपर्छ । यस विषयमा हिजोको भन्दा अहिले सुध्रिएको अवस्था छ । पूर्णरुपमा नियन्त्रण भइसकेको छैन । कसैलाई ह्र्यासमेन्टमेन्ट भयो भने प्रहरीलाई सूचना दिनुपर्छ । कसैलाई यदि ह्यारास्मेन्ट भएको छ भने तुरुन्तै कारवाही गर्ने सवालमा ढिलासुस्ती गरिन्छ । यस्तो ढिलासुस्तीले हुंदैन । राजनीतिमा मैलें ह्र्यासमेन्टको अनुभव गर्न परेन । तर, महिलालाई जति राम्रो काम गर्दापनि गर्नै सक्दिन भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिन्छ । अपठ्यारो त राजनीतिमा पनि छ ।
यो सोचले नै महिलाहरुलाई अगाडि बढ्न दिदैन । अघि मैले भने त्यस्तो वातावरण तयार गरिन्छ । नेताहरुसगँ समर्पित भएपछि मात्र पद पाइन्छ र अगाडि बढिन्छ भन्ने सोचपनि हावी छ । महिलाहरु आफैँ सचेत हुनुपर्ने हो । पुरुषहरुले यस्तो वातावरण बनाउँछन्, महिलालाई प्रयोग गरेर महिलालाई कमजोर बनाईदिन्छन् । हामी लडेर भिडेर क्षमताले यो ठाउँमा आएका महिलाहरु हौं । अहिलेको राजनीति हेर्नुहुन्छ भनेँ कुनै पनि कुरामा पुरुष भन्दा महिला कमजोर छैनन् । दाबीका साथ म भन्छु अहिलेको मन्त्रिपरिषद्, सांसद र पार्टीमा सक्षम महिला नै आएका छन् । पुरुषभन्दा कमजोर छैनन् । केहि अपबाद त हुन सक्छ ।
त्यस्ता कमजोर पात्रलाई प्रयोग गरिएको पनि हुन सक्छ । नेतासंग सर्मपित भएरपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोच महिलाले त्याग्न सक्नुपर्छ । हामीले देख्छौँ नि महिलाहरु नै राष्ट्रपति, सभामुख तथा मन्त्री भएका छन् । उहाँहरुका विषयमा कति सरल र सहज ढङ्गमा मान्छेहरुले नकारात्मक तरिकाले विश्लेषण गरिदिन्छन् । त्यो गलत ढङ्गको विश्लेषणलाई हामी महिलाले प्रतिकार गर्नुप¥यो नि । हामीले उहाँहरुको पक्षमा बोल्नुपर्छ तर केहि महिलाहरु ‘ए हो त है’ भनेर हो मा हो मिलाउँछन् । ठीक कुरा हो भने हो भन्नुपर्छ तर बेठीकलाई पनि हो भन्नु भएन । अध्ययन गर्न जरुरी छ, दुख र सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ । हामी महिला हौँ भनेरमात्रै पुग्दैन । पुरुषजस्तै खट्न र दुःख गर्न सक्नुपर्छ । महिला भएको नाताले मैले पाउँनुपर्छ भनेर हुंदैन । युग प्रतिष्प्रर्धाको छ । आफुलाई निर्खान सक्नुपर्छ । अहिले केहि आरक्षणका अवस्थाहरु छन् तर यो सधैँ रह्यो भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन नि त । त्यसैले यो कुराको अन्त्य स्वयं हामीहरुबाट गर्नुपर्छ ।
interview wih kunti shahi rajya mantri state minister